ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းက Ballon d'Or ရဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်း | FOX Sports Myanmar
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းက Ballon d’Or ရဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်း
ဒီနေ့အတွက် ရေပန်းအစားဆုံးသတင်းနဲ့ဆောင်းပါးတွေကတော့ Ballon d’Or ဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့အချက်တွေ ၊ အချက်အလက်တွေက ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်။မက်ဆီ – ရိုနယ်ဒို လွှမ်းမိုးမှုကို မိုဒရစ် ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေနောက်မှာ ထားရစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအလွန်မှာတော့ ပထမဆုံး ဒီလွှမ်းမိုးမှုကိုဖောက်ထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအလွန် Ballon d’Or ဆုအတွက် ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးချိန်မှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
Ballon d’Or ဆုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ခရိုအေးရှား ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တဲ့ မိုဒရစ်
🥇 Best FIFA Men’s Player
— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto)3December 2018
လူကာမိုဒရစ် ဒီဆုကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာက ခရိုအေးရှားဘောလုံးလောကအတွက်လည်း တကယ့်ကိုအမှတ်တရ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။သူ့အတွက် တစ်ဦးချင်းအောင်မြင်မှုဆိုပေမယ့် ခရိုအေးရှားဘောလုံးသမားတွေထဲမှာတော့ ဒီဆုကို ပထမဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့သူပါ။နိုင်ငံအသင်းအတွက်လည်း ကမ္ဘာ့ဖလား စံချိန်တင်အောင်မြင်မှု ရယူပေးနိုင်ခဲ့သလို ကလပ်အသင်းအတွက်လည်း ချန်ပီယံလိဂ်မှာ (၃) နှစ်ဆက်အောင်မြင်မှုကို မိုဒရစ်စွမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အရင်က ခရိုအေးရှား ကစားသမားတွေထဲမှာ Ballon d’Or ရယူနိုင်ဖို့ အနီးစပ်ဆုံးရှိခဲ့တဲ့ကစားသမားကတော့ ဒေဗာဆူကာ တစ်ဦးတည်းသာရှိခဲ့ပြီး (၁၉၉၈) ခုနှစ်မှာ ဆုတံဆိပ် ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဇီဒန်းရဲ့နောက် ဒုတိယနေရာမှာ ရပ်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
(၂၀၁၂) ခုနှစ်နောက်ပိုင်း နေမာအတွက် အဆိုးရွားဆုံးရပ်တည်မှု
ပီအက်စ်ဂျီအသင်းတိုက်စစ်မှူး နေမာအတွက်ကတော့ ဒီနှစ်အဆင့်ရပ်တည်မှုက (၆) နှစ်တာကာလအတွင်းအဆုံးဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ရိုနယ်ဒို ၊ မက်ဆီတို့ရဲ့နောက် တတိယနေရာနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ်မှာတော့ အဆင့် (၉) ဆင့်ထိကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးအဆင့် (၁၂) နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ နေမာအတွက်တော့ (၂၀၁၂) ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ် အဆင့် (၁၀) ပြင်ပမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
📅 August 2017:
📝 Joins PSG to improve his chances of winning the Ballon D’Or.
📅 December 2018:
😳 Ranked 12th on Ballon d’Or list.
🤦‍♂️ First time since 2012 that he’s ranked outside the top 10. pic.twitter.com/MZblFherNw
မဲအရေအတွက် လုံးဝရရှိခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ ကစားသမား (၂) ဦး
Ballon d’Or ဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်ဖို့အတွက် ကစားသမား အယောက် (၃၀) စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ပြီး ဒီထဲကနေမှ ပရိသတ်တွေကို မဲပေးရွေးချယ်စေပါတယ်။ဒီကစားသမား (၃၀) ထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ရီးရဲလ် နဲ့ စပိန်ကွင်းလယ်လူ အစ္စကို နဲ့ ပြင်သစ်ဂိုးသမား ဟူဂိုလောရစ်တို့ကတော့ မဲအရေအတွက် တစ်မဲမှရရှိခဲ့ခြင်းမရှိပဲ အောက်ဆုံးအဆင့်မှာရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်။မဲပေးရွေးချယ်ရာမှာ ပထမအနေရာအတွက် ထားပြီးအရွေးခံရသူက (၆) မှတ် ၊ ဒုတိယနေရာက (၄) မှတ် ၊ တတိယနေရာက (၃) မှတ် ၊ စတုတ္ထနေရာက (၂) မှတ် နဲ့ ပဉ္စမနေရာက ကစားသမားက (၁) မှတ်ပေါင်းထည့်ပေးခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။
မက်ဆီရဲ့ ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုကျော်အတွင်း အဆိုးရွားဆုံး မှတ်တမ်းစံချိန်
(၂၀၀၇) ကစလို့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အထိ ပထမ ၊ ဒုတိယနေရာတွေမှာပဲ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီအတွက် အဆင့် (၅) နေရာဆိုတာ တကယ့်ကိုဆိုးရွားလွန်းနေပါတယ်။(၂၀၀၇) ခုနှစ်က ကာကာ နဲ့ ရိုနယ်ဒိုတို့နောက် တတိယနေရာမှာ ရပ်တည်ခဲ့ပြီးနောက် နောက်ဆုံး (၁၁) ကြိမ်မှာ ပထမ (၅) ကြိမ် ၊ ဒုတိယ (၅) ကြိမ်နဲ့ တတိယ (၁) ကြိမ်တို့ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ထိပ်ဆုံးနေရာမှာ ပါဝင်နေဆဲ ရိုနယ်ဒို
မက်ဆီလိုပဲ ရိုနယ်ဒိုလည်း တူညီတဲ့မှတ်တမ်း (၁၁) ကြိမ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်ဆုပေးပွဲပြီးချိန်မှာတော့ ရိုနယ်ဒို မက်ဆီကို နောက်ကောက် ချထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ။အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ မက်ဆီရဲ့ မှတ်တမ်းအတိုင်း ရိုနယ်ဒိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပေမယ့် ဒီနှစ်တာ ဒုတိယရရှိခဲ့လို့ ဒုတိယအကြိမ်အရေအတွက် (၆) ကြိမ်နဲ့ မက်ဆီကို ထားရစ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ဘာစီလိုနာအသင်း နဲ့ Ballon d’Or ရရှိမှုစံချိန်တူညီခဲ့တဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်
မိုဒရစ် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ Ballon d’Or ဆုက ရီးရဲလ်အသင်း ကစားသမားတွေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ (၁၁) ခုမြောက် Ballon d’Or ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယခင်က (၁၀) ကြိမ်ရယူထားနိုင်ခဲ့ရာမှာ (၁၉၅၇ နဲ့ ၁၉၅၉) မှာ ဒီစတီဖာနို ၊ (၁၉၅၈) မှာ ကိုပါ ၊ (၂၀၀၀) ပြည့်နှစ်မှာ ဖီဂို ၊ (၂၀၀၂) မှာ ရိုနယ်ဒို ၊ (၂၀၀၆) မှာ ကန်နာဗာရို နဲ့ (၂၀၁၃ ၊ ၂၀၁၄ ၊ ၂၀၁၆ ၊၂၀၁၇) တို့မှာ ရိုနယ်ဒိုတို့ ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပါ။ယခင်က ဘာစီလိုနာအသင်းထက် တစ်ကြိမ်လျေ့နည်းနေခဲ့တဲ့ ရီးရဲလ်အသင်းအတွက်ကတော့ တူညီတဲ့ စံချိန်တစ်ခုကို လိုက်မှီနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေႛအတကြ် ရေပန်းအစားဆုံးသတင်းနဲႛဆောင်းပၝးတေကြတော့ Ballon dメOr ဆုပေးအပ်ခဵီူးမငြ့်ခဲ့တဲ့သတင်းနဲႛ ပတ်သက်တဲ့အခဵက်တြေ ၊ အခဵက်အလက်တေကြ ထိပ်ဆုံးမြာရြိနေပၝတယ်။မက်ဆီ – ရိုနယ်ဒို လမြ်းမိုးမကြို မိုဒရစ် ရဲႚ အောင်ူမင်မတြေနြောက်မြာ ထားရစ်ိုံင်ခဲ့္ဘပီး ဆယ်စိုံစ်ြတစ်ခုအလန်ြမြာတော့ ပထမဆုံး ဒီလမြ်းမိုးမကြိုဖောက်ထကြ်ိုံင်ခဲ့တဲူ့ဖစ်ရပ်ူဖစ်ခဲ့ပၝတယ်။
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအလွန် Ballon dメOr ဆုအတကြ် ပေးအပ်ခဵီူးမငြ့်ခဲ့္ဘပီးခဵိန်မြာ စိတ်ဝင်စားဖိုႛကောင်းတဲ့အခဵက်အလက်တေကြို ဖော်ူပပေးခဵင်ပၝတယ်။
Ballon dメOr ဆုကို ပိုင်ဆိုင်ိုံင်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံး ခရိုအေးရြား ကစားသမာူးဖစ်လာခဲ့တဲ့ မိုဒရစ်
လူကာမိုဒရစ် ဒီဆုကိုပိုင်ဆိုင်ိုံင်ခဲ့တာက ခရိုအေးရြားဘောလုံးလောကအတက်ြလည်း တကယ့်ကိုအမတ်ြတရူဖစ်ရပ်ူဖစ်စေခဲ့ပၝတယ်။သူႛအတကြ် တစ်ဦးခဵင်းအောင်ူမင်မဆြိုပေမယ့် ခရိုအေးရြားဘောလုံးသမားတေထြဲမြာတော့ ဒီဆုကို ပထမဆုံးပိုင်ဆိုင်ိုံင်ခဲ့သူပၝ။ိုံင်ငံအသင်းအတက်ြလည်း ကမ္တာႚဖလား စံခဵိန်တင်အောင်ူမင်မြ ရယူပေိးိုံင်ခဲ့သလို ကလပ်အသင်းအတက်ြလည်း ခဵန်ပီယံလိဂ်မြာ (၃)ိံစ်ြဆက်အောင်ူမင်မကြို မိုဒရစ်စမြ်းဆောင်ခဲ့ပၝတယ်။အရင်က ခရိုအေးရြား ကစားသမားတေထြဲမြာ Ballon dメOr ရယိူိုံင်ဖိုႛ အနီးစပ်ဆုံးရြိခဲ့တဲ့ကစားသမားကတော့ ဒေဗာဆူကာ တစ်ဦးတည်းသာရြိခဲ့္ဘပီး (၁၉၉၈) ခိုံစ်ြမြာ ဆုတံဆိပ် ရယိူိုံင်ခဲ့တဲ့ ဇီဒန်းရဲႚနောက် ဒုတိယနေရာမြာ ရပ်တည်ခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။
(၂၀၁၂) ခိုံစ်ြနောက်ပိုင်း နေမာအတကြ် အဆိုးရြားဆုံးရပ်တည်မြ
ပီအက်စ်ဂဵီအသင်းတိုက်စစ်မြူး နေမာအတက်ြကတော့ ဒီိံစ်ြအဆင့်ရပ်တည်မကြ (၆)ိံစ်ြတာကာလအတငြ်းအဆုံးဆုံူးဖစ်ခဲ့ပၝတယ်။္ဘပီးခဲ့တဲိံ့စ်ြက ရိုနယ်ဒို ၊ မက်ဆီတိုႛရဲႚနောက် တတိယနေရာနဲႛ ရပ်တည်ိုံင်ခဲ့ပေမယ့် ဒီိံစ်ြမြာတော့ အဆင့် (၉) ဆင့်ထိကဵဆင်းသြားခဲ့္ဘပီးအဆင့် (၁၂) နေရာကိုရောက်ရြိသြားခဲ့ပၝတယ်။ဒၝဟာ နေမာအတက်ြတော့ (၂၀၁၂) ခိုံစ်ြနောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအဋ္ဌကိမ် အဆင့် (၁၀)ူပင်ပမြာ ရပ်တည်ိုံင်ခဲ့တာူဖစ်ပၝတယ်။
မဲအရေအတကြ် လုံးဝရရြိခဲူ့ခင်းမရြိခဲ့တဲ့ ကစားသမား (၂) ဦး
Ballon dメOr ဆုပေးအပ်ခဵီူးမငြ့်ဖိုႛအတကြ် ကစားသမား အယောက် (၃၀) စာရင်းကို ထုတ်ူပန်္ဘပီး ဒီထဲကနေမြ ပရိသတ်တေကြို မဲပေးရြေးခဵယ်စေပၝတယ်။ဒီကစားသမား (၃၀) ထဲမြာ ပၝဝင်ခဲ့တဲ့ ရီးရဲလ် နဲႛ စပိန်ကငြ်းလယ်လူ အင်္စကို နဲႛူပင်သစ်ဂိုးသမား ဟူဂိုလောရစ်တိုႛကတော့ မဲအရေအတကြ် တစ်မဲမရြရြိခဲူ့ခင်းမရြိပဲ အောက်ဆုံးအဆင့်မြာရပ်တည်ခဲ့ပၝတယ်။မဲပေးရြေးခဵယ်ရာမြာ ပထမအနေရာအတကြ် ထား္ဘပီးအရြေးခံရသူက (၆) မတြ် ၊ ဒုတိယနေရာက (၄) မတြ် ၊ တတိယနေရာက (၃) မတြ် ၊ စတုတညနေရာက (၂) မတြ် နဲႛ ပဥင်္မနေရာက ကစားသမားက (၁) မတ်ြပေၝင်းထည့်ပေူးခင်းခံရတာူဖစ်ပၝတယ်။
မက်ဆီရဲႚ ဆယ်စိုံစြ် တစ်ခုကေဵာ်အတငြ်း အဆိုးရြားဆုံး မတ်ြတမ်းစံခဵိန်
(၂၀ဝ၇) ကစလိုႛ္ဘပီးခဲ့တဲိံ့စ်ြအထိ ပထမ ၊ ဒုတိယနေရာတေမြာပဲ ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ မက်ဆီအတကြ် အဆင့် (၅) နေရာဆိုတာ တကယ့်ကိုဆိုးရြားလနြ်းနေပၝတယ်။(၂၀ဝ၇) ခိုံစ်ြက ကာကာ နဲႛ ရိုနယ်ဒိုတိုႛနောက် တတိယနေရာမြာ ရပ်တည်ခဲ့္ဘပီးနောက် နောက်ဆုံး (၁၁) ဋ္ဌကိမ်မြာ ပထမ (၅) ဋ္ဌကိမ် ၊ ဒုတိယ (၅) ဋ္ဌကိမ်နဲႛ တတိယ (၁) ဋ္ဌကိမ်တိုႛရရြိခဲ့ပၝတယ်။
ထိပ်ဆုံးနေရာမြာ ပၝဝင်နေဆဲ ရိုနယ်ဒို
မက်ဆီလိုပဲ ရိုနယ်ဒိုလည်း တူညီတဲ့မတ်ြတမ်း (၁၁) ဋ္ဌကိမ်ရြိခဲ့ပၝတယ်။ဒၝပေမယ့် ဒီိံစ်ြဆုပေးပြ္ဘဲပီးခဵိန်မြာတော့ ရိုနယ်ဒို မက်ဆီကို နောက်ကောက် ခဵထာိးိုံင်ခဲ့ပၝ္ဘပီ။အပေၞမြာ ဖော်ူပခဲ့တဲ့ မက်ဆီရဲႚ မတ်ြတမ်းအတိုင်း ရိုနယ်ဒိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့ပေမယ့် ဒီိံစ်ြတာ ဒုတိယရရြိခဲ့လိုႛ ဒုတိယအဋ္ဌကိမ်အရေအတကြ် (၆) ဋ္ဌကိမ်နဲႛ မက်ဆီကို ထားရစ်ိုံင်ခဲ့ပၝ္ဘပီ။
ဘာစီလိုနာအသင်း နဲႛ Ballon dメOr ရရြိမစြံခဵိန်တူညီခဲ့တဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်
မိုဒရစ် ပိုင်ဆိုင်ိုံင်ခဲ့တဲ့ Ballon dメOr ဆုက ရီးရဲလ်အသင်း ကစားသမားတြေ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ (၁၁) ခုေူမာက် Ballon dメOrူဖစ်ခဲ့ပၝတယ်။ယခင်က (၁၀) ဋ္ဌကိမ်ရယူထာိးိုံင်ခဲ့ရာမြာ (၁၉၅၇ နဲႛ ၁၉၅၉) မြာ ဒီစတီဖိာိုံ ၊ (၁၉၅၈) မြာ ကိုပၝ ၊ (၂၀ဝ၀)ူပည့်ိံစ်ြမြာ ဖီဂို ၊ (၂၀ဝ၂) မြာ ရိုနယ်ဒို ၊ (၂၀ဝ၆) မြာ ကန်နာဗာရို နဲႛ (၂၀၁၃ ၊ ၂၀၁၄ ၊ ၂၀၁၆ ၊၂၀၁၇) တိုႛမြာ ရိုနယ်ဒိုတိုႛ ပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာပၝ။ယခင်က ဘာစီလိုနာအသင်းထက် တစ်ဋ္ဌကိမ်လေဵႛနည်းနေခဲ့တဲ့ ရီးရဲလ်အသင်းအတက်ြကတော့ တူညီတဲ့ စံခဵိန်တစ်ခုကို လိုက်မြီိုံင်ခဲ့္ဘပီူဖစ်ပၝတယ်။
Home Football ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းက Ballon d’Or ရဲ့ စံချိန်မှတ်တမ်း